यदी साँच्चै भोटे मेला ब्यूँताउने हो भने … « Farakkon
तुलसीपुर, फागुन १९ । तुलसीपुर पर्सेनीस्थित कालोखोलामा यसपाली पनि भोटे मेला सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । फागुन २६ गतेदेखि चैत २ गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको भोटे मेलाको प्रचारप्रसार तीब्र पारिएको छ । बिगतमा कालोखोलामा लाग्ने भोटे मेला जुम्ला तथा हिमाली जिल्लाहरुबाट घोडासहित जाडो छल्न दाङ झर्ने भोटेहरुको उपस्थितिमा लाग्ने गर्दथ्यो । त्यसैको संझनामा फेरि कालाखोलामा भोटेमेला ब्यूँताउने प्रयास गर्न थालिएको छ ।
त्यतिबेला स्वस्फूर्त रुपमा मेला स्थलमा मानिसहरु भेला भएर आफ्ना स्थानीय उत्पादनहरु बेच्ने गर्दथे । उखु, बदाम, सखर खण्ड, गुर, पिङ जस्ता कुराहरु तत्कालिन समयमा भोटे मेलामा व्यापार हुने गर्दथ्यो ।
तर, अहिले उक्त मेला ब्यूँताउने प्रयास गरिएपनि त्यो स्वाभाविक भन्दापनि प्रायोजित जस्तो देखाउने प्रयत्न हुन थालेको छ । भोटे मेला ब्यूँताउने नाममा चलेका कलाकार बोलाउने र प्रबेश शूल्क लिने जस्ता प्राबधान राखिएको हुँदा मेला सबैका लागि बन्नेमा आशंकाहरु ब्यक्त हुन थालेका छन् । ‘मेला सबैका लागि खुल्ला हुनु पर्छ, त्यहाँ प्रबेश शूल्क लिनु हुँदैन,’ एक स्थानीयले भने ‘त्यो केहीका लागि पैंशा कमाउने धन्दा बन्न सक्छ ।’
लामो समयदेखि लाग्दै आएको कालोखोलाको भोटे मेला माओबादी युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा २०५६ सालदेखि बन्द भएको थियो । त्यसमा माओबादी त्रासदी र स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रणले भूमिका खेलेको थियो ।
तर, गतवर्षदेखि मेलालाई फेरि निरन्तरता दिन प्रयास गरिएको छ । मेला ब्यूँताउने प्रयास भनिएपछि गत बर्ष मेला स्थलमा टेन्ट टाँगिएको थियो । मञ्च तयार गरिएको थियो । जहाँ ठूला माइकहरु घन्काइएका थिए । डिजे साउण्ड सिष्टमहरु थिए । केही व्यक्तिहरुलाई मञ्च दिने, भाषण गर्ने, आधुनिक नृत्य प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्यहरुले प्राचिन मेलाहरुको उपहास गरेको थियो ।
आम सर्वसाधारण जम्मा भएर लाग्ने भोटे मेला पटक्कै त्यस्तो स्वरुपको थिएन । भोटेमेला जुन रुपको थियो त्यही रुपको बनाउन नसक्ने हो भने मेला ब्यूँताउन खोज्नु औचित्य पुष्टि हुने छैन । भोटेमेला हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने सेतु थियो ।
हिमालका उत्पादन, पहाड, र तराईमा पुग्यो । तराईको उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने गर्दथ्यो । हिमाली जडीबुटीहरु सिलाजित, पदमचाल, पाँच आंैंले, आर्चागुम्बा यहाँ बिक्थे, यहाँका नुन, तेल, लत्ता कपडा, नयाँ औजार, उपकरण बिक्रि तथा पर्दशनी गर्ने त्यो बिशाल बजार थियो ।
मेला आयोजकले कुन रुपमा भोटे मेला ब्यूताँउन चोहका हुन ? त्यसमा उनीहरु यसमा सजग बन्न सक्नु पर्छ । रमाईलो मेला वा महोत्सवका रुपमा लगाएर क्षणिक चर्चा र रकम असुल्ने कि ? साँच्चिकै भोटे मेलालाई ब्यूँताउने र भबिस्यका लागि मेलालाई हिमाल, पहाड र तराईको संगमस्थलका रुपमा बिकास गर्ने ? यो स्पष्ट भएर मात्रै मेला आयोजना गर्नु उचित हुने छ ।
यसपाली तुलसीपुर एक्सप्रेस प्रालीको आयोजना तथा रानीघाट युवा क्लवको सहआयोजना एवं तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ को संरक्षकमा प्राचिन भोटे मेला सञ्चालन गर्न खोजिएको हुँदा उल्लेखित कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
मेलामा देउडा,लोक दोहरी प्रतियोगिता, घोडा दौड प्रतियोगिता हुने जानकारी दिइएको छ । गत बर्षपनि स्थानीय कृषकका घोडाहरु दौडाइएको थियो । पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो । एक किसिमले त्यसले उनीहरुमा उत्साह थपेको थियो । यसपाली पनि मेलामा देउडा,लोक दोहरी प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसले रौनकता अवश्य थप्ला ।
तर, मेला भनेपछि ब्यक्तिहरु स्वस्फूर्त रुपमा आउने र रमाउने वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्छ । अनि पो मेला मेला जस्तो हुन्छ । मेलामा, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक बिबिधता झल्किन्छ ।
अझ यसपाली मेलामा प्रवेश शुल्क विद्यार्थीलाई ४० र अन्यलाई ५० रुपैया तोकिएको कुरा सुन्नमा आएको छ । त्यसो हो भने मेलाको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जिन सक्छ । मेला आयोजक यसमा सजग हुन जरुरी छ । अन्त्यमा – तपाँईले देखेको र देख्न चाहेको भोटे मेला कस्तो हुनु पर्छ ? त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोस ।